literature (Sahite Sangra) साहित्य संग्रह: के लोकतन्त्र भनेको यही हो त?
article, story, poem, lekh , rachana, gazal, katha, picture, image, remember, speech, introduction, family, jokes,
के लोकतन्त्र भनेको यही हो त?
भर्खर भर्खर सात आठ वर्षमा पाहिला टेकेका यी कलिला बालबालिकहरू सडक, गल्ली, चौरमा जब मानिसको भीड़ बन्न थाल्छ तब आफ्नो दिनचर्या शुरू गर्न थाल्छ्न। उनिहरुको गृहकार्य भनेकै भीड़ बटुल्ने अनि आफूतिर आर्कषित गर्ने हुन्छ। बाटोमा हिड्ने बटुवा, भिडले जे दिन्छ सोही ग्रहण गर्न तत्पर रहन्छ। कहिले सहजै त कहिले असहजै रुपमा आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन। भिड र बटुवाको व्यवाहार अनि वचनलाई आर्शीवाद सम्झदै एक दुई तीन......पाँच....दश रुपिँया फ्याक्ने, दिने व्यक्तिलाई देवता मान्दै पुज्दै जानु बाहेक अरु केहि छैन। कहिले कसो कमाइको दुइचारपैसा पनि लुटिने अवस्था छ ।
रत्नपार्कमा पछौरा डोसाएर गितार अनि गीत ufpFb} दुई बच्चाहरु, पैसा संकलन गर्दै .
त्यस्तै रत्न्पार्कमा प्रत्येक दिन मानिसको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दछ। त्यो बाक्लो भिड्लाई बेरोजगारको समूह पनि भन्ने गरिन्छ। जे होस त्यहाँ विभिन्न तह क्षेत्रका भिन्दै संस्कृति संस्कार बोकेका मानिसको उपस्थिति हुने गर्दछ। काठमाण्डौ अधिकांश ठाउँमा जाने आउने सवारिसाधनको संगम स्थल भएकोलेपनि होला। साच्चै रत्नपार्क रत्नाले भरिपूर्ण पनि छ। कसैले दिन बिताउने थलोको रुपमा परिभाषित पनि गरे होलान। भने कोही यसैसँग नाता गासिए झै दिनहुँ यसको सफा सुग्घरमा तल्लिन हुदै आफूलाई परिचित गराउँदा हुन्। जे होस\_ बाँदरका हातमा नरिवल जस्तै भएको यो लोकतंत्र, यो स्वतंत्रता र यसले ब्युजाँएका बिउहरू विभिद तरहले फस्टाउँदै छन\_। होस\_मा होस\_ नपुगेर होस\_ यात रहरै रहर अनि बाध्यता र देखिएको सत्यता, यर्थाथता होस\_। कोही मजा, आनन्द, स्वाद चाख्ने शिलशिलामै बडारीएका छन\_। त अर्को तर्फ झांगिएका पनि छन\_। कयौ बेचिएका छन\_ त कयौ किनिएका छन\_। दलाली, भ्रष्ट्रचारी, गुण्डा, लफंगा, शैतानहरू राजनिति भन्दै आफ्नो पापबाट छुटकारा पाइराखेका छन\_।
यस्तै बालबालिकाको क्षेत्रमा विभिन्न खाले दानवी रूपका अभद्र शैलीका आमाबाबु देखापरेका छन\_। जन्माउने अनि हुर्काउनुको साटो बजारमा लिलामिको रुपमा सरसामान जस्तै स्टलहरु खड़ा गरेका छन\_। दुनियाले के भन्ला, के सोच्ला भगवान्\_ले के देख्ला डरकर हराएका यी ती यस्ता त्यस्ता अभद्र शैली श्रृजित भएको छ। जसलाई सरकार, प्रशासन, राजनिती दल, नेता, कानुन व्यवसायी, शिक्षक, संघसंगठन, सभासद, गैर राजनितिक दल, नागरिक कर्मी, पत्रकार र अन्य क्षेत्रबाट बहिषकार, सुधार उन्मुखको साटो आश्रय मिल्नुको साथै उन्मुखको उत्पात, उन्मात गर्ने प्रेरणा जागृत गराइएको छ।
मानिसहरु कलिलो बालकले बजाइरहेको गितारको धुन अनि बालिकाको स्वरमा झुम्दै।
लोकतन्त्र भनेको यही हो ? पढ्ने उमेर अनि खेल्ने उमेरका बच्चाहरु बाटो सड़क, कल्ली हुदैँ फोहोरका थुप्रामा पलास्तिकका थैला पढ्दै घामपानी नभनी सूर्य उदाउस वा अस्ताउस, चन्द्र चम्के वा नचम्के, दिनरात नभनी पसीना चुहाँउदै आहार खोज्न बाध्य भएका छन। यस्ता सयौ घटना यो लोकतन्त्र भन्नेमा पनि घतिरहेका छन।
संसारमा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी ठान्ने मानिस आज यो आधुनिक भनौ वा नाङ्गे युगमा पशुले पशुलाई गर्ने व्यवाहार मानिसले मानिसलाई गर्न सकेको छैन\_। पशुले आफ्ना सन्तानलाई गर्ने रक्षा, दिने माया ममता कस्तो ईष्यापूर्ण छ तर मानिसले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो विनास ठान्न थालेका छन\_। सन्तान जन्माउनु भनेको ठूलो भूल रे, सन्तान भनेका आमाबाबुका ठूला शत्रु हुन्\_ रे, यस्ता विविध कारण दर्शाउदैँ आमाबाबु सन्तान बाट टाढिन थालेका छन\_। यो परिपाटी, पाटो ठीकै थियो तर हाम्रो सानो, विपन्न अनि गरीब मुलुकको सर्न्दभमा, जनसंख्या पनि घट\_ने थियो तर हाम्रो देश नेपालमा जन्म, विवाह र मृत्युको छुट्टै संस्कृति संस्कार छ। हाम्रो आफ्नै मुल्यमान्यता छन\_। ती मुल्यमान्यतालाई आधार मानेर चल्ने हो भनेपनि सही हुन्\_ जान्छ तर हामी नेपालमा जन्मेर पनि विदेशी कल्चर अवलम्बन गरिरहेका छौँ। भन्छौ विदेशी हस्तक्षेप तर आफै विदेशी जिस्काउने र आऊ स्वागत छ भनेर काखी च्याप्ने प्रवृति छ।
जसको फलस्वरूप यहाँको संस्कार, संस्कृति त्याग्न सम्म पछि नपर्ने। त्यागी सकेपछि पुर्णरुपमा समर्पित हुन् नसक्ने अनि आफ्नो संस्कृति २५ प्रतिशत, भारतीय संस्कृति २५ प्रतिशत, चाईनिज २० प्रतिशत, अमेरिकी २० प्रतिशत र अन्य विदेशी स्वदेशी प्रतिशत जोड्दै शतप्रतिशत संस्कृति निर्माण गर्ने। जुन हाम्रा लागी "Little Knowledge is Dangerous" साबित हुन् गएको छ।
Posted by naveen at 9:07 PM
कृपया कोही व्यक्ति, मित्र, संस्था हुनुहुन्छ यस साहित्य संग्रह ब्लग मा प्रस्तुत भएका लेख रचना लाई प्रेस को अनुहार चखाउन भने तुरुन्त सम्पर्क गर्नहोस् धन्यबाद !
Click adds & Earn
ए युवती !
केटीको अगाडी पो पुगेछु
चक्र पाणी चालिसे
One day of student
Goshahi Kunda (lake)
पहाड़ी प्रदेश (Hilly Region)
बौद्ध धर्मका चारधाम
बुद्ध धर्मको मुल ग्रन्थ : त्रिपिटक
भगवान बुद्धका आठ उपदेश
A man and woman can be good friends
Pull and Push factor
रारा ताल (Rara Lake)
रसायन, तत्व, ग्यास
राष्ट्रिय गान National Anthem of Nepal
सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली
प्रकृतिको कोटि कोटि सम्पदाको आँचल
ज्ञानभूमि शान्तिभूमि तराई पहाड़ हिमाल
बहुल जाती भाषा धर्मं संस्कृति छन विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल ।
............ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ .................